Gazety mpitsidika " Journey-Assist - Hevitra, hevitra, torohevitra, fahatsiarovana
Pejy fandraisana » Lahatsoratra mpitsidika
Lahatsoratra navoaka amin'ity pejy ity voasoratra anarana mpitsidika ny vavahadinay. Mazava ho azy fa mety hiseho eto koa ny lahatsoratrao na ny fanadihadinao. Lahatsoratra izay misy torohevitra mahasoa, tolo-kevitra, famaritana toerana mahaliana, hevitra sy ny zavatra toy izany. Mazava ho azy, alohan'ny hamoahana, ny lahatsoratra rehetra dia arakaraka ny maha-zava-dehibe ny atiny 🙂
Toerana Top 10 fitsidihana any Angleterre lisitry ny atiny Angletera dia toerana tsara hitsidihana, na ny mpandeha dia mankany amin'ny diany voalohany na faha-XNUMX any ivelany. Ampahany io satria tsy misy sakana amin'ny fiteny miteny anglisy, na dia re manerana ny tany aza ny fiteny eto. Newbies dia mety te-...
Top 10 zavatra tokony hatao any London Fanjakana anglisy Lisitry ny atiny: Londres feno fahasambarana sy marolafy kolontsaina dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra eto an-tany misy mponina 8 tapitrisa. Izy io dia tanàna manerantany amin'ny kolontsaina, lamaody, vola, politika ary varotra, ary mijanona ho iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao ataon'ireo mpizahatany iraisam-pirenena. Manana fahitana malaza maro ny tanàna, ary ...
Faritra 6 tsara tarehy indrindra any Finlandy Lisitry ny atiny Iray amin'ireo firenena farany avaratra eto an-tany, toerana tsara hijerena i Finlandia, satria itoeran'ny ala midadasika sy farihy marobe izay niforona taorian'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany rehefa namakivakin'ny vongan-dranomasina ireo faritra maro an'isa ao amin'io faritra io. Amin'ny morontsiraka lava, izay mifanila amin'ny ...
Toerana mahaliana 10 any Romania Lisitry ny atiny Romania, izay miorina eo amin'ny saikinosy Balkan, dia firenena iray mifanipaka. Ny firenena Bloc Atsinanana taloha nandritra ny taona maro dia an'ny Hongroà, Ottomans ary Romana, izay nanome ny firenena ny anarany. Ny firenena dia feno tanàn-dehibe tranainy, trano fandraisam-bahiny izay manolotra vintana amin'ny fanaovana ski ambony, ary fitomboan'ny ...
Faritra 9 tsara indrindra ao Romania Lisitry ny atiny Romania, any atsimo atsinanan'i Eropa, no firenena lehibe indrindra amin'ity faritra ity ary misy tendrombohitra, havoana ary lemaka malalaka, izay ivoahan'ny reniranon'i Danube, mankany amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mainty. Ny Carpathians manaitra dia miakatra ambonin'ny tanin'ny firenena, saingy raha ny tena izy ...
Tanàna tsara tarehy 5 ao amin'ny Cinque Terre. Italia Lisitry ny atiny The Cinque Terre dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra any Italia. Ny fitsidihana farafaharatsiny amin'ireo tanànany dia hanamarina izany. Ny Cinque Terre dia noforonina handravahana karatra paositra. Ny dimy amin'ireo tanànany dia any avaratrandrefan'i Italia, eo amin'ny havoana mideza sy harambato avo manoloana ny Ranomasina Mediterane ...
Top amoron-dranomasina 10 any Honduras Lisitry ny atiny Ny morontsiraka tsara dia tsara foana, indrindra raha any amin'ny firenen-kafa ny morontsiraka. Tsy handiso fanantenana anao ny torapasika any Honduras any Amerika Afovoany. Ny morontsirak'i Honduras dia 750 km (470 mi), mizara roa amin'ny tanibe sy Karaiba. Amin'ny morontsiraka maro dia maro ianao, azo antoka fa hahita torapasika izay ...
Nosy 5 ambony ao Honduras Lisitry ny atiny Voahodidin'i Goatemalà, El Salvador, Nikaragoa, ny Ranomasina Karaiba ary ny Oseana Pasifika no firenena Honduras. Betsaka ny zavatra azo atolotra ny Tanindrazana Honduras, ary ivon-kolontsaina ireo tanàna toa an'i Tegucigalpa sy San Pedro Sula. Manana morontsiraka sy toerana mahafinaritra toa an'i Kusuko National Park ihany koa ny firenena. Na dia…
Toerana fitsangatsanganana 10 be indrindra any British Columbia Lisitry ny atiny British Columbia, any amin'ny morontsiraka andrefan'i Kanada, dia mahafinaritra foana ny mitsidika. Ny faritra dia eo anelanelan'ny Oseana Pasifika sy ny Rocky Kanadiana, miaraka amina velaran-tany mahatalanjona maro. Na mpanao ski, mpandehandeha, mpahay tantara na mpivarotra entana ianao, dia azo antoka fa hahita zavatra hatao eto. Ny faritany dia noforonina tsy ...
Firenena manintona 10 manintona an'i Kanada any Kanada dia firenena manan-karena be azo atolotra, manomboka amin'ny manintona ny nosy ka hatrany amin'ny riandrano tendrombohitra mahafinaritra. Ity zanatany frantsay sy britanika teo aloha ity dia miainga avy amin'ny Atlantika ka hatrany Pasifika ary manana lova manankarena avy amin'ny Indiana any amin'ny morontsiraka avaratry British Columbia ka hatrany amin'ireo mpikaroka frantsay any Quebec. Satria samy frantsay sy ...
Faritra tsara tarehy 6 any Canada Lisitry ny atiny Kanada no firenena faharoa lehibe indrindra manerantany raha oharina amin'ny velaran-tanety, faharoa amin'i Russia. Izy io dia tandavan-tanety mitohy mitohy miaraka amin'ny tundra any avaratra sy ahitra maitso any atsimo. Kanada dia manana farihy betsaka kokoa noho ny firenena hafa rehetra manerantany; Eto ny Great Lakes ...
Toerana Top 10 mahaliana any Russia Lisitry ny atiny Firenena lehibe indrindra eto an-tany, Russia dia manolotra traikefa maro karazana ho an'ireo mpandeha. Manomboka amin'ny fitsangatsangana ny tehezan'ireo tendrombohitra manjavozavo ka hatrany amin'ny fandehanana manaraka ny moron'ny farihy tranainy indrindra eto an-tany. Ireo toerana manan-tantara sy hetsika ara-kolontsaina dia hita ihany koa ao amin'ireo tanàna lehibe ao amin'ny firenena. Tsy maninona raha mijery ny faritany ianao ...
Toerana 10 mahavariana indrindra any atsinanan'i Russia
Toerana 10 mahavariana indrindra any atsinanan'i Russia Lisitry ny atiny Ny ankamaroan'ireo mpitsidika izay mankany Rosia dia mandany ny fotoanany any amin'ny faritra andrefan'ny firenena. Ny tanàna toa an'i Mosko sy St. Petersburg dia be tolotra, nefa aza adino ny zavatra rehetra hita any atsinanan'i Russia. Ity no toerana raha liana amin'ny toetra masiaka ianao, hatramin'ny Farany Atsinanana Rosiana ...
Fijerena angovo azo avy amin'ny masoandro eto amin'izao tontolo izao Ny masoandro dia manome angovo 15 tapitrisa mahery mihoatra ny isan-taona lanin'ny olombelona. Ny tombony lehibe amin'ny angovo avy amin'ny masoandro dia ny fahazoana sy ny tsy fahampian'ny ankapobeny, ary koa ny fiarovana ny tobin-herin'ny herin'ny masoandro ho an'ny tontolo iainana. Hatreto dia manodidina ny 10 ny fomba fanovana ny taratra masoandro izay novolavolaina sy ampiasaina (amin'ny mizana miavaka) ...
15.01.2021 / Angel / Zava-mahaliana, fanazavana / fanehoan-kevitra amin'ny Prospect ho an'ny angovo avy amin'ny masoandro eto amin'izao tontolo izao tsy misy
Ny valan-javaboary 6 lehibe indrindra eto an-tany Lisitry ny atiny Rehefa tapitra ny faritra mafana eto amin'ny faritra misy anao, mety tsara raha manomboka mitady valan-drano izay afaka mijanona misokatra mandavantaona ary tsy tratry ny rivotra sy ny orana. Maro ny valan-drano an-trano no maniry ny manambara ny halehiben'izy ireo sy ny habeny valan-drano to ...
21.12.2020 / rem / Valan-drano, Zava-mahaliana / fanehoan-kevitra amin'ireo valan-javaboary 6 lehibe indrindra eran-tany tsy misy
Ny zoo 8 lehibe indrindra eran-tany Lisitry ny atiny Ka zoo iza no lehibe indrindra manerantany? Ny valin'ity fanontaniana ity dia miankina amin'ny masontsivana izay nampiasana ny teny hoe "lehibe". Mandrefy ny isan'ireo karazana babo na ny velarantanin'ny zoo izahay. Raha ny singa faharoa ihany no raisintsika, dia ny Zoo Redlife Wildlife ...
19.12.2020 / rem / toy ireny, Zava-mahaliana, fanazavana / fanehoan-kevitra hanoratra zoo 8 lehibe indrindra eto an-tany tsy misy
Ny lalam-piaramanidina helikoptera 10 mahaliana indrindra amin'ny latabatra manerantany momba ny sidina Helikoptera dia tsy vitan'ny manome ny mpitsidika fomba fijery tsy manam-paharoa momba ny tanàna na faritra iray, fa koa traikefa nahafinaritra sy mahaliana. Ankoatr'izay, ny fitsidihana angidimby dia matetika no fomba tokana ahafahan'ny mpitsidika mankafy mijery ireo faritra lavitra kokoa ao amin'ilay faritra. Ohatra, Hawaii 70 isan-jato ...
19.12.2020 / rem / Zava-mahaliana, fanazavana / fanehoan-kevitra amin'ny làlana helikoptera 10 mahaliana indrindra eto an-tany tsy misy
10 amin'ireo rindrina malaza indrindra eto an-tany Ny tabilao misy ny rindrina dia namboarina hatramin'ny andro taloha mba hamaritana ireo fetra hitazomana ireo fahavalo na lasibatra hafa. Vao tsy ela akory izay, ny rindrina dia natsangana ho tsangambato sy firafitry ny zavakanto. Fa na inona na inona tanjon'izy ireo, ny rindrina dia manjaka amin'ny tontolo misy azy ireo ...
15.12.2020 / rem / Zava-mahaliana / fanehoan-kevitra amin'ny rindrina 10 malaza indrindra eto an-tany tsy misy
20 amin'ireo tetezana mampatahotra indrindra eto amin'ny latabatra misy izao tontolo izao Raha natao tetika hanomezana antsika làlana azo antoka hiampitana sakana amin'ny lalan-kizorana amin'ny lalana iray mankany amin'ny iray hafa ny tetezana iray, ny sasany amin'izy ireo, farafaharatsiny, dia tokony hialana amin'ny filaminanao manokana. Miampita ny sasany, lavitra ny fitsangantsanganana ity ...
05.12.2020 / Mazalya / Zava-mahaliana / fanehoan-kevitra amin'ireo tetezana 25 mampatahotra indrindra eto an-tany tsy misy
10 лучших туристических направлений в Британской Колумбии Оглавление Британскую Колумбию, находящуюся на западном побережье Канады, всегда приятно посетить. Регион расположен между Тихим океаном и Канадскими Скалистыми горами, с множеством потрясающих пейзажей между ними. Если вы лыжник, путешественник, историк или шопоголик, вы обязательно найдете здесь, чем заняться. Провинция создана не только ...
22.01.2021 / rem / Kanada, Amerika Avaratra / fanehoan-kevitra Ho any amin'ny toerana 10 ambony any British Columbia tsy misy
10 лучших достопримечательностей Канады Оглавление Канада - страна, которой есть что предложить посетителям, от островных достопримечательностей до живописных горных водопадов. Эта бывшая французская и британская колония простирается от Атлантического до тихоокеанского побережья и имеет богатое наследие от индейцев северного побережья Британской Колумбии до французских исследователей Квебека. Поскольку и французский, и ...
21.01.2021 / rem / Kanada, Amerika Avaratra / fanehoan-kevitra amin'ny top 10 manintona any Canada tsy misy
6 самых красивых регионов Канады Оглавление Канада - вторая по величине страна в мире по площади суши, уступает только России. Он представляет собой обширные массивы непрерывных ландшафтов с тундрой на севере и травянистыми прериями на юге. В Канаде озер больше, чем в любой другой стране мира; Здесь расположены Великие Озера ...
20.01.2021 / rem / Kanada, Amerika Avaratra / fanehoan-kevitra amin'ny faritra 6 tsara indrindra any Canada tsy misy
18.01.2021 / rem / Honduras, tora-pasika, Amerika Atsimo / fanehoan-kevitra Ho an'ny tora-pasika 10 tsara indrindra any Honduras tsy misy
Nosy 5 ambony ao Honduras Lisitry ny atiny Voahodidin'i Goatemalà, El Salvador, Nikaragoa, ny Ranomasina Karaiba ary ny Oseana Pasifika no firenena Honduras. Betsaka ny zavatra azo atolotra ny Tanindrazana Honduras, ary ivon-kolontsaina ireo tanàna toa an'i Tegucigalpa sy San Pedro Sula. Manana morontsiraka sy toerana mahafinaritra toa an'i Kusuko National Park ihany koa ny firenena. Na dia ...
18.01.2021 / rem / Honduras, Ny Nosy / fanehoan-kevitra amin'ireo nosy 5 tsara indrindra any Honduras tsy misy
Fijerena angovo azo avy amin'ny masoandro eto amin'izao tontolo izao Ny masoandro dia manome angovo 15 tapitrisa mahery mihoatra ny isan-taona lanin'ny olombelona. Ny tombony lehibe amin'ny angovo avy amin'ny masoandro dia ny fahazoana amin'ny ankapobeny sy ny tsy fahampian'ny fiainana, ary koa ny fiarovana ny tobin-herin'ny masoandro ho an'ny tontolo iainana. Ankehitriny, manodidina ny 10 ny fomba fanovana ny taratra masoandro izay novolavolaina sy nampiasaina (amin'ny mizana hafa) ...
Fitsidihan'ny mpanoratra Ny indostrian'ny fizahan-tany dia nivelatra tamin'ny fomba hafahafa tato anatin'ny roa taona lasa, ary miaraka amin'ny fanaparitahana ny Internet sy ny haitao, dia lasa mihalehibe hatrany ny mpandeha ary mitaky ny fahasamihafana sy ny harenan'ny fandaharam-potoanan'ny dia na fialan-tsasatra teo aloha. , famindrana, fampiantranoana, fiantohana, ...
15.01.2021 / Angel / fanazavana / fanehoan-kevitra amin'ny fitsangatsanganan'ny mpanoratra tsy misy
14.01.2021 / Angel / Rosia / fanehoan-kevitra amin'ny toerana fizahan-tany mahaliana 10 any Russia tsy misy
08.01.2021 / rem / Grande-Bretagne, Eoropa / fanehoan-kevitra Ho any amin'ny toerana 10 ambony hitsidihana any Angletera tsy misy
Top 10 zavatra tokony hatao any London Fanjakana anglisy Lisitry ny atiny: Londres feno fahasambarana sy marolafy kolontsaina dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra eto an-tany misy mponina 8 tapitrisa. Izy io dia tanàna manerantany amin'ny kolontsaina, lamaody, vola, politika ary varotra, ary mijanona ho iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao ataon'ireo mpizahatany iraisam-pirenena. Manana mari-pamantarana malaza maro ny tanàna, ary ...
04.01.2021 / rem / Grande-Bretagne, Eoropa / fanehoan-kevitra amin'ny top 10 manintona any London. Great Britain tsy misy